अमेरिकामा कसरि सफल बन्ने त​?– — — — — — — — — — — — — — — — — — अमेरिकामा सफल जिवन जिउन तपाइलाइ मेरा एकसय प्रश्नहरु - Enepalese.com
अमेरिकामा कसरि सफल बन्ने त​?– — — — — — — — — — — — — — — — — — अमेरिकामा सफल जिवन जिउन तपाइलाइ मेरा एकसय प्रश्नहरु
इनेप्लिज २०७३ साउन १६ गते ११:०२ मा प्रकाशित
तपाइको रोजाइ अमेरिका नै किन बन्यो त​? तपाइ अमेरिकामा के का लागि आउनु भ​एको? केका लागि तपाइ अमेरिकालाइ नै कर्म भुमि बनाउदै हुनुहुन्छ​? बस्ने कानुनि कागज बनाएर अमेरिकि नागरिकता लिन र अमेरिकि पासपोर्ट नै बोक्न तपाइलाइ किन रहर इच्छा छ त​? तपाइ अमेरिकामा हिजो शुरुको दिनमा के गर्दै हुनुन्थ्यो र आज धेरै बर्ष पछि पनि तपाइ के गर्दै हुनुहुन्छ​? तपाइ हिजो के गर्नुहुन्थ्यो शुरुका दिनमा र अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ अमेरिकामा? के के कुरा हासिल गर्नु भयो र के शिक्षा दियो त तपाइलाइ अमेरिकाले? कति कमाउनु भयो अहिलेसम्म अमेरिकामा? कति घण्टा काम गर्नुहुन्छ तपाइ अमेरिकामा दिनमा र हप्तामा? कति तनाखा बुझ्नु हुन्छ र खर्च गरेर कति बचत गर्नुहुन्छ त महिना तपाइ अमेरिकामा? तपाइ कामको नेचर परिबर्तन गर्दै हुनुहुन्छ कि? वा अरुको काम गर्दागर्दै आफ्नै केहि गर्ने मुडमा हुनुहुन्छ त​? के तपाइ अहिलेसम्म अमेरिकाको बसाइबाट खुशि हुनुहुन्छ​? के तपाइका बच्चा परिवार खुशि छन त अमेरिकामा र तपाइसङ्ग​? कमाएको रकम कति गाडी, भाडा, ग्रोसरि, स्वास्थ्य​, जिवन बिमा, गाडी, घर वा अन्य बिमामा कति रकम जान्छ तपाइका अमेरिकामा? कति दान चन्दा, भोजभतेर​, गिफ्ट वा भ्याकेशन वा फुर्मासिमा कति रकम खर्च गर्नु हुन्छ​?
कमाएको रकममा बचतको उपायहरु अबलम्बन गर्नु भ​एको छ त​? तपाइले कमाएर खर्च मात्रै गरिरहनु भ​एको छ कि भोलिका लागि पनि केहि बचतमा ध्यान दिनु भ​एको छ कि छैन​? के तपाइले नगदमा मात्रै काम गर्नु भ​एको छ कि या चेकमा पनि? के तपाइले आफ्नो कमाइलाइ कानुनि बनाउनु भ​एको छ​? के तपाइले बर्षेनि कर दाखिला गर्नु भ​एको छ कि छैन​? कर दाखिला गर्दा तपाइले बचत र बुझाएको करको बढि फिर्ता आउने उपायहरु के अबलम्बन गर्नु भ​एको छ​? के तपाइका छोराछोरिले स्कुल वा कलेजमा राम्रो नराम्रो के कस्तो गरिरहेका छन भनेर निगरानि सोधपुछ र हेरबिचार गरिरहनु भ​एको छ​? बच्चाहरुको अतिरिक्त क्षमता अभिब्रिदिमा के तपाइले ध्यान पुर्याउनु भ​एको छ​? घर खर्च​, किफायति, घर सन्चालन र समुन्नतिका लागि के घरमा सल्लाह छलफल र परिवारका लागि समय प्रदान गरिरहनु भ​एको छ? के तपाइले कमाएको डलर गलत ठाउमा खर्च त गरिरहनु भ​एको छैन​? के तपाइसङ्ग १ बर्षे, २ बर्षे, ५ बर्षे घरायसि योजना र सम्ब्रिदिका लागि चिन्तन मनन गरिरहनु भ​एको छ​? के तपाइको परिवार र बच्चाहरु तपाइको दैनिकि, काम​, थकान, प्रेम, भाबना, सन्तुष्टि र सहयोग आदानप्रदान र खुशियालिमा कतै बाधा, फरकता र आइसोलेशनको अनुभुतिको अध्ययन गरिरहनु भ​एको छ​? तपाइकतै तनाब डिप्रेशनको कतै शिकार त हुनुहुन्न​? पारिवारिक​, काम​, आर्थिक र सामाजिक डिप्रेसन र स्ट्रेसले तपाइलाइ कतै खाइरहेको त छैन​? तपाइका बच्चा, परिवार गलत सङ्गत​, कुलत र गलत काममा त फसिरहेको छैन​?
तपाइ कतै शारिरिक र मानसिक रोग एबम तनाबले पिडित त हुनुहुन्न​? तपाइले अहिलेसम्मको समय र उपलब्धिलाइ समिक्षा गर्न भ्याउनु भ​एको छ​? तपाइ आर्थिक सम्ब्रिदि र अबसरको लागि ब्यबसाय गरौ भन्ने मुडमा त हुनुहुन्न​? तपाइ कहि कतै गलत मानिसहरुको गलत सल्लाहको शिकार त बनिरहनु भ​एको छैन​? तपाइ आफ्नो परिवार र आफ्नो बच्चाहरुको चिन्ता भन्दा पनि सामाजिक कामका लागि समय गलत ढङ्गले दुरुपयोग त भैरहेको त छैन​? तपाइको स्वास्थ्य र खानपिन​, उठबस​, ब्यायाम र सुत्ने समयको तालिका र नियमितालाइ फलो गरिरहनु भ​एको छ​? दिनमा तपाइको अनुत्पादक कल​, फोन​, टेक्स म्यासेज र च्याटिङ्गमा कति समय खेर फालिरहनु भ​एको छ​? तपाइ भबिस्यमा तपाइको अबकाश जिबन अमेरिकामै बिताउने कि जन्म घरतिर वा अन्य कतै जाने योजना बनाइरहनु भ​एको छ कि? अमेरिका आएर अबसर, आर्थिक समुन्नति, शिक्षा, ज्ञान र क्षमता हासिल गर्न सक्नु भयो त​? तपाइले कहि कहिले तपाइलाइ कसरि सफलता हासिल गर्ने? कसरि गुणात्मक जिवनशैलि जिउने? कसरि अरु भन्दा बढि सफल बन्ने? कसरि अमेरिकि प्रणालिमा छिर्ने? कसरि आफ्नो सफलतालाइ नेपालिको पहिचान अभिब्रिदिमा टेवा पुर्याउने? कसरि आफुले प्राप्त गरेका ज्ञान​, सफलता, प्रबिधि, शिक्षा र स्रोत र साधनलाइ आफ्नो मात्रिभुमिसम्म पुर्याउने भनेर कहिले चिन्तन मनन गर्नु भ​एको छ​? यि प्रश्नहरु तपाइका लागि। उल्लेखित जिज्ञासाहरुमा तपाइको मेल कहा खायो या खाएन​? तपाइले उल्लेखित उठाइका प्रश्नहरुमा आफुलाइ ढाल्ने, चिन्तन गर्ने र बिगतमा आफुलाई समिक्षा गर्न नभ्याइएको वा ध्यान नपुगेको रहेछ भने पनि अब आफु, आफु वरिपरि वा परिवार र आफ्नो समुन्नतिका लागि चिन्ता गर्ने समय भैसकेको हुनसक्छ या ढिला हुनसक्छ। समय बग्दो छ​, समयलाइ फलो नगर्दा, समयको महत्व नबुझ्दा, हुलबाजि र गलत मानिसहरुको सरसङ्गतले तपाइले आफुले आफैलाइ रुइन गर्ने कार्यमा लागिरहनु भ​एको छ वा नजान्दा नजान्दै परिबन्द वा महसुस गर्ने अबस्थामा हुनुहुन्छ भने उल्लेखित प्रश्नहरु तपाइका आगामि दिन उज्जल हुनसक्ने बाटो हुनसक्छ र आफुलाइ सुधार्ने र बिगतका गल्तिहरुलाइ सुझार्दै भबिस्यलाइ सुन्दर बनाउने बाटोमा तपाइलाइ आखा देखाउन मद्दत पुगोसपनि।
बाकि अरु लेखमा।